अतिरिक्त शुल्क नबुझाउँदा कुनै मेडिकल कलेजले गेटमै रोके, कसैले गार्ड लगाएर बाहिर निकाले - Rato Pana
अतिरिक्त शुल्क नबुझाउँदा कुनै मेडिकल कलेजले गेटमै रोके, कसैले गार्ड लगाएर बाहिर निकाले
by ratopana १८ पुष २०७८, आईतवार 0
काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेजले अतिरिक्त शुल्क नतिरेका विद्यार्थीलाई कलेज प्रवेशमै रोक लगाउन थालेका छन्।
विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज र सिनामंगलस्थित काठमाडौं मेडिकल कलेजले गेटमै रोक लगाएको पीडित बताउँछन्।
यी कलेजले ४० लाखसम्म अतिरिक्त शुल्क मागेका छन्। जसमध्ये ४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बुझाइसकेको विद्यार्थीको भनाइ छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकिएभन्दा बढी शुल्क नलिन निर्देशन दिए पनि कलेज सञ्चालकले त्यसको पालना गरेका छैनन्। नोबेल मेडिकलका प्रिन्सिपल प्रा.डा.रामहरि घिमिरेले अतिरिक्त शुल्क लिएको स्वीकार गरे।
‘शुल्क तिरेकाहरूले पढिरहेका छन्’, प्रिन्सिपल प्रा.डा. घिमिरेले भने, ‘नतिरेकाहरू आएका छैनन्।’
‘हामीलाई कलेजभित्र छिर्न दिएका छैनन्’, एक विद्यार्थीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सित भने, ‘अतिरिक्त शुल्क नतिरे नआउनू भनेको छ। के गर्नु विश्वविद्यालयलाई पैसा बुझाइसक्यौं।’ केहीले ४० प्रतिशतसम्म शुल्क तिरेको ती विद्यार्थीले सुनाए।
३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउन देउवालाई सकस
ठेक्का लाग्यो पक्की पुलको, तर बन्यो बाँसको पुल !
भारतमा कोरोना संक्रमितको संख्य ९९ लाख नाघ्यो, एक लाख ४३ हजारको मृत्यु
विप्लवलाई व्यक्ति हत्या छाडेर शान्तिपूर्ण मार्गमा आउन कांग्रेसको आग्रह
एनएमएसआरए एफ १५ नकआउट क्रिकेट प्रतियोगितामा एनएमएसआरए रेड विजयी
ratopana December 25, 2021
ratopana December 18, 2020 February 9, 2021